आफैं उत्पन्न नहुने भए कसरी बन्यो सुन ? वैज्ञानिकहरूले खोले यस्तो रहस्य
You are at:Home»विश्व»आफैं उत्पन्न नहुने भए कसरी बन्यो सुन ? वैज्ञानिकहरूले खोले यस्तो रहस्य
By bktnews Posted on	 October 12, 2021 विश्व
काठमाडौं । सुनको खपत प्रत्येक देशमा भारी मात्रामा हुने गर्छ । झन् हाम्रो जस्तो धार्मिक संस्कारहरू धेरै भएको देशमा सुनको प्रयोग अत्यधिक हुन्छ । तर कसरी बने र सुन र अन्य धातु यस पृथिवीमा ?
वैज्ञानिकहरूका अनुसार सुन तथा अन्य धातु पृथिवीमा आफैं उत्पन्न भएका होइनन् ।
करीब ४५० करोड वर्षअघि खगोलीय पिण्डहरू पृथिवी, मंगलग्रह र चन्द्रमा बेस्सरी ठोकिएका थिए । यो टक्करबाट पृथिवीमा अनि मंगल र चन्द्रमामा पनि सुन र प्लेटिनम जस्ता धातु पुगेका थिए । यो भयंकर र विनाशकारी टक्करका कारण पृथिवी आफ्नो धुरीबाट १० डिग्रीसम्म सरेको थियो ।
भारतीय वायुसेवाको विमान दुर्घनाग्रस्त , पाइलट सामान्य घाइते